Mutungamiri weWindows Server Certification: MCSA, MCSE uye MTA | ITS
A Vatangi Vatungamiri veWindows Server Certification: MCSA, MCSE uye MTA
Mutungamiri weWindows Server Certification MCSA MCSE neMTA
Pfungwa nepfungwa inotarisira diagram yeprogram yeMicrosoft mazano ekufambiswa kwemashoko mune zvemashoko. Idzo pfungwa dzinofadza ndeyekugadzirisa huri nani. Inofanira kunzwisiswa kune dzakawanda zvehutano zveMicrosoft zvinowanikwa mumusika. Kubvumirwa kweMicrosoft Office ndeyezvikumbiro uyewo zveesktops, mapuratifomu ekugadzirisa uye ma database.
Uyu mutungamiri wezvivimbiso zvose zveMicrosoft zvinokuzivisa iwe MCSA certification, MCSE certification, MTA chiyeuchidzo. Aya mapurogiramu ekuzivisa yeMicrosoft akavimbwa mumakore ese uye anoshandiswa kumusoro kusvika sevheti dzakakosha zvikuru. Microsoft inogadza vatungamiri, makambani ekuongorora uye masangano ekutsigira pamusoro pezvinhu zvose zvoupfumi uye maitiro anowanikwa kubva kuMicrosoft.
Kunyanya, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti pasi pei MCP chiyeuchidzo, inonzi MCSA, MCSE uye zvipupuriro zveUnyanzvi zvinowanikwa. MOS uye MTA zvibvumirano hazviiti pasi peTMP tag. Chirongwa chekuti hapana kuongororwa kunotarisirwa kunofanirwa kunzwisiswa zvakakosha kuti zvikwanise kugadziriswa kune vedts zvakataurwa pamusoro apa.
Kunzwisisa zvose zvidzidzo
Microsoft Server cert track inosanganisira MTA, MCSE uye MCSA zvidzidzo. Pakati peMTA Server pane inouya yega yega chiyeuchidzo chinonzi IT Infrastructure. Kuti uwane zvakafanana, tarisiro inofanirwa kupfuurira kuongororwa uri woga kubva kune mashanu. Idzi dzinovhara zvidzidzo uye nzvimbo dzakadai sehutungamiri hutungamiri hukuru, hutongi hutungamiri, kushandiswa kwezvinhu uye zvigadzirwa, Cloud uye kuchengeteka.
Ne MCSA Server track, panouya Windows 2008, 2012 uye 2016 seva. Aya mawindo eWindows Server anoda zvitatu zvitatu kune imwe neimwe. Izvo zvingaita, iwe unoda miedzo miviri chete yeLuxux pane chizivo cheAzure uye MCSA: Cloud Platform. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi chinoita sechinokosha pakuzotevera. Microsoft Database cert nzira inosanganisira MCSA, MTA uye MCSE. MTA Database tracking inoda imwe kuongorora. Pamusoro pe MCSA Database track, idzi ndi MCSA: SQL Server 2012 / 2014 uye MCSA: SQL 2016. Izvi zvinoda miedzo mitatu.
MCSA Desktop cert inosanganisira imwe chiziviso cheWindows 10 sezvazvakaziviswa munaJanuary 2017. Nokuwana MCSA: Windows 10 iwe unofanirwa kudarika zvidzidzo zvishomanana.
MCSA Apps track inosanganisira imwe cert - kuti iite, MCSA: Office 365. Mimwe miedzo inotarisirwa kuwana izvi. Microsoft inopa MOS Office 2016 cert yebazi rimwe rekushanda. MOS 2016 Expert cert anoziva avo vane ruzivo rwepamusoro kweHurumende maitiro. Vanokwikwidza vanoda kubvisa zvidzidzo zvina. MOS 2016 Mudzidzisi anoda kuregedza miedzo mitanhatu.
Microsoft Server vhidhiyo yakanyatsokodzera maTTER masangano anobatanidza nekugadzira, kuendesa, kuisa kana kutungamirirwa kwehutano hweWindows. Izvi zvinogona kusanganisira madhiketi kana kunyange magadhi. Avo vane MS certs vanozadza sevashandi, vatungamiriri, vaongorori nezvimwewo.
Munguva pfupi, MCSA chiyeuchidzo, MCSE chiyeuchidzo uye MTA chiziviso chave chiri kuwedzera chimiro chinonyatsozivikanwa uye simba. Vaya vanotsvaka MCSA vachigadzirira kana kuti MCSA dzidzo uye kudzidziswa kweMicrosoft kunobatanidza nezvikwata zvakadai seHofisi 365, Office uye Microsoft Dynamics 365.
Kusvikira muna March 31 gore rino, MCSE Server nhamba yakapiwa SharePoint, Communication, Private Cloud, Cloud Platform uye Infrastructure, Messaging uye Server Infrastructure for Server Infrastructure, Desktop Infrastructure uye Private Cloud tracks unofanirwa kuratidza MCSA: Windows Server 2012.
Nokuda kweMishumo, Kukurukurirana uye Kugoverwa zvirongwa unofanira kutora MCSA yeHofisi 365 certification. Iwe unofanirwa kuenderera mberi uchienda mune zvisingasviki pane zvingangodaro miedzo yakasiyana-siyana yekukunda chikwata che MCSE Server. MCSE Database Database ine zvikwata zvitatu zvinopiwa. Chimwe chinonyanya kuzivikanwa ndeye MCSE: Data Management uye Analytics, asi mbiri mbiri isati iri MCSE: Business Intelligence uye MCSE: Data Platform. Nyaya yakanyanya kunyanya kutarisa inoda zvidzidzo zvina. Mutevedzeri wedzimwe yakawanda unoda mishanu miedzo. Iyo mbiri mbiri dzakatangira dzakadzokera shure kunopa nzvimbo ku MCSE: Data Management uye Analytics.
Microsoft Desktop cert nzira inofambidzana neMTA, Microsoft Specialist uye MCSA zvidzidzo. Mucherechedzo weMicrosoft muWindows 10 achatarisira kuti munhu abvise kuongororwa. MTA Desktop nzira ine unhu huripo hweTI Infrastructure. Izvi zvakafanana naMTA Server track yatakagara tamboongorora. MTA IT Infrastructure track inoda kuti iwe upfuure kuongororwa uri oga kune zvishanu zvachose. Iko kuongororwa kuri maitiro ehutungamiri, kushandiswa, Windows Server hutungamiri, kushandurana, uye gore uye gadget zvakakosha.
Microsoft Mushandi weCont nzira inoenda pamwe neCSD uye MTA certs. MTA Mushandi weCont anoona avo vari pachikamu chechirongwa semapurogiramu ekugadzira. Ichi chiyeuchidzo chinoda kukwikwidza kuwana chimwe chezviongorori zvitatu. Zvichida nzvimbo yacho ndeye HTML5 yekushandiswa kwekufambira mberi kwemasimboti, programming improvement uye programming test zvakakosha.
Zvimwe Zvimwe Zvinyorwa: